Akụrụngwa - Dongguan Weldo nkenke machining Co., Ltd.
Na afọ 10 gara aga, anyị enwetawo ọtụtụ ahụmịhe ọkachamara. Ngwunye akụrụngwa zuru ezu, teknụzụ ndị ọrụ nke mbụ, ahụmịhe njikwa njikwa. Anyị nwere ike inye elu mma nkenke akụkụ maka ndị ahịa. Anyị ejirila ya na-anya isi.
Na nha, anyị na-etinye mmepụta mma mbụ. Onye oru ọ bụla, njikọ ọ bụla, usoro ọ bụla na usoro ọ bụla na-akwado site na akụrụngwa. Anyị na-emepụta teknụzụ dị elu. Imeri site na mma.
Na akụkụ, anyị na-etinye nlebara anya na njikọ ọrụ ọ bụla.
Ndị na-enyocha ọfụma na-enyocha ngwaahịa anyị oge niile iji hụ na ngwaahịa na ogo ngwaahịa. Anyị ga-enwe akụrụngwa maka nyocha akụkụ, nke mere na ndị na-ebubata ngwaahịa nwere ezigbo aha ọma na ndekọ ndekọ dị elu ruo ọtụtụ afọ.
Onye na-enye ọzụzụ na-enye ọzụzụ na teknụzụ maka azịza ndị ọrụ teknụzụ, na-eme ka ndị ọrụ mara ihe mara nke ọma, ma na-elekwasị anya na usoro ọrụ, iji melite ogo nke usoro mmepụta ma na-eme akụkụ dị oke mma.
Onye na-arụ ụgbọ ala nwere ahụmịhe nke igwe. Ha ga na-enyocha ngwa ọrụ eji arụ ọrụ iji hụ na arụ ọrụ igwe ahụ dị mma.
Ngalaba ndị isi na ahụmịhe ọkachamara ha bara ụba na-eduga akụkụ iji mepụta ọtụtụ akụkụ ziri ezi.
Anyị na-atụ anya ịga ụwa, ka ụwa hụ ngwaahịa anyị dị elu ma jiri ngwaahịa anyị. Mepụta uru maka gị.